Isikhokelo sephaneli yegumbi ecocekileyo yegumbi eliphindwe kabini
Iphaneli yegumbi ecocekileyo yegumbi inokuchasana kakuhle nomlilo kwaye yipaneli engatshiyo. Ixesha eliqhubekayo lokutshisa ilangatye ngu-zero, 800 ° C alitshisi, i-1200 ° C ngaphandle kwamadangatye, kwaye lifikelela kwelona nqanaba liphezulu linobungqina bomlilo elingenakutsha A1.
Iphaneli yegumbi ecocekileyo yegumbi inokumelana kakuhle nomlilo kwaye ayinakho ukutsha iphaneli. Ixesha eliqhubekayo lokutshisa ilangatye ngu-zero, 800 ° C alitshisi, i-1200 ° C ngaphandle kwamadangatye, kwaye lifikelela kwelona nqanaba liphezulu linobungqina bomlilo elingenakutsha A1. Inkqubo yokwahlulahlula eyenziwe nge-keel ekumgangatho ophezulu inomda wokumelana nomlilo weeyure ezi-3. Ngaphezulu, isixa esikhulu samandla obushushu sinokufunxwa kwinkqubo yokutsha komlilo, kulibazise ukwanda kweqondo lobushushu. Kwimozulu eyomileyo, ebandayo kwaye efumileyo, ukusebenza kwe-magnesium yeglasiiphaneli Ihlala izinzile kwaye ayichaphazeleka kukuxinana nomoya ofumileyo. Nokuba ifakwe emanzini kangangeentsuku ezimbalwa kwaye ikhutshiwe, iya kome ngokwendalo. Ayizukukhubazeka okanye ithambe. Ingasetyenziswa ngesiqhelo. Ukufakwa kokufuma kunye nokubuyela kwe-halogen kuya kwenzeka. Emva kovavanyo, iiphaneli ayinako ukungena emanzini.
Ubungqina obungenamanzi kunye nobumanzi
Kwimozulu eyomileyo, ebandayo kwaye efumileyo, ukusebenza kweglasi yemagniziyam engangenisi umlilo iphaneli ihlala izinzile kwaye ayichaphazeki ngamathontsi amanzi ajijekileyo nomoya ofumileyo. Nokuba ifakwe emanzini kangangeentsuku ezininzi kwaye ikhutshiwe, iya kome ngokwendalo. Ayizukukhubazeka okanye ithambe. Ingasetyenziswa ngesiqhelo nangokugqibeleleyo. Into yokufakwa kokufuma nokubuya kwe halogen ayizukwenzeka. Emva kovavanyo, iiphaneli ayinako ukungena emanzini.
Ubunzima kunye nokulwa neenyikima
Ukuxinana okubonakalayo kweglasi yemagniziyam engatshi iphaneli Ngu-0.8-1.2g / cm3, ocutha umthwalo wesakhiwo, unciphisa ubunzima bodonga lwangaphakathi lwesakhiwo ngaphezulu kwe-60%, kwaye yonyusa indawo enokusetyenziswa nge-5-8%. Ubunzima bokukhanya bulungele ukumelana nenyikima yesakhiwo kwaye kunciphisa ngokufanelekileyo iindleko zesiseko kunye nolwakhiwo oluphambili.
Ilaphu elikhethekileyo le-fiberglass eli-5.1.8 elixineneyo leglasi yemagniziyam kunye nefayibha yesityalo enobukrelekrele obuhle yenza ukuba iglasi yemagniziyam ingacimi umlilo iphaneli ukukhanya ngobunzima, kodwa ulwakhiwo luhlangene, luzinzile, alukhubazekanga, kwaye lunobunzima obufana nomthi. Isebenza kakuhle ngokunyanzelwa, ukuqina kunye nokuqhekeka kokuqhekeka, ngokuqina kunye nokuqina okulinganayo. Amandla okugoba afikelela kuma-322kgf / cm2 (nkqo) kunye ne-216kgf / cm2 (ethe tyaba), kwaye amandla eempembelelo anokufikelela kwi-25MPa.
Iglasi yemagniziyam engangenisi umlilo iphaneli ayiqulathanga i-asbestos, i-formaldehyde, i-benzene kunye nezinto ezinobungozi kwi-radioactive, kwaye ayinamsi, ayinabungozi kwaye ayinasiporho xa ivezwe emlilweni. Izinto ezivelisiweyo ziipowder yendalo yezimbiwa kunye nefayibha yesityalo. Inkqubo yemveliso igcinwa ngokwendalo, kusetyenziswa amandla aphantsi, akukho lindle, ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo. Inkqubo ye-iphaneli umphezulu awunawo umgubo xa usetyenziswa. Ubume bayo bendalo eyahlukileyo bunokuhlengahlengisa ubushushu bangaphakathi. Yenza igumbi kunye neofisi zikhululeke ngakumbi.
Ukufakwa kwe-Thermal kunye nokonga umbane
Iglasi-yemagniziyam engangenisi umlilo iphaneli ineempawu zemingxunya efanayo, ukubumbana kunye nezinto ezingaphiliyo. Ukuqhutywa kwe-thermal yi-0.216w / cm · k, eyona nto ifudumeza ubushushu ngaphezu kwe-1.1w / cm · k yokusika amatye ekalika-isanti, okonga ukusetyenziswa kwamandla kunye nokugcina igumbi likwimeko entle kunye nomoya omtsha.
Umgangatho ophezulu weglasi-yemagniziyam enganyangekiyo ngomlilo iphaneli, ezinzileyo nethembekileyo kumgangatho. Xa kuthelekiswa nezinye iglasi-wemagniziyam umlilo-nekudodobalisaiphanelis, inentsebenzo elungileyo yexabiso, ubunzima bokukhanya, amandla aphezulu, amaxabiso aphakathi, ukuqhubekeka kokusebenza kunye nokusebenza kokufakwa, kwaye kunokuncanyathiselwa, ukusikwa, ukubethelelwa, ukubethelwa, ukupeyintwa, ukucwangciswa kunye nokuhanjiswa. Lula, ubulukhuni ophezulu, akukho lula ukwaphula, self-uthinte iinzipho, izikhonkwane umpu kunye iinzipho ngqo zingasetyenziswa ngokungenamkhethe ufakelo ukukhanya, kwaye emanzi neyomileyo imisebenzi ukujinga ingasetyenziswa.
Ukufakwa kwesandi kunye noxolo
Ukusebenza kokugquma kwesandi okuphezulu kwiglasi-yemagniziyam engangenisi umlilo iphaneli iqinisekisa indawo yokuhlala ethuleyo nenhle. Ubuncinci bokukhanyaiphaneli ayichaphazeli ukusebenza kokugquma kwesandi seglasi yemagniziyam engangenisi umlilo iphaneli. Ukugquma kwesandi se-6mm ubukhuluiphaneli yi-29dB, kunye nenkqubo yokwahlulahlula kabini macala e-9mm yeglasi yemagniziyam engacimi umlilo iphaneli Inkqubo yokwahlula umoya yentsimbi engama-75 keel 50 iphanelis.
Indawo ekhethekileyo egudileyo kunye erhabaxa yeglasi yemagniziyam engangenwa ngumlilo iphaneli ibonelela ngokwahluka okusebenzayo kubathengi. Umphezulu ogudileyo unamatheliswe ngephepha lodonga, iiphaneli zealuminium-zeplastikhi, zokuhombisa ezingangenwa ngumliloiphanelis, veneer, PVC, paint spray okanye latex paint, njl .; umphezulu omdaka unokuncamathelisa iithayile, imabhile, inyengane, uthuli kunye nepeyinti yelatex. Iglasi-yemagniziyam engangenisi umliloiphaneli unobumbano obuhle kakhulu kwizinto ezikhankanywe ngasentla. Inokuqhubekeka kabini kwindawo okanye isetyenziswe kabini. Inokugoba kwaye ibunjwe ngobubanzi be-30cm ngaphandle kokulahleka kwepropathi.
Ifomula yesayensi isombulula ngokupheleleyo ingxaki yokufunxa kunye nokubuya kwe-halogen yeglasi yemagniziyam. Amandla ayo anyuka ngokuhamba kwexesha, anokumelana nokubola, iasidi kunye nealkali, ukwanda kwe-thermal kunye nokucutha ukutshintsha kancinci, ireyithi yokuncipha eyomileyo ≤ 0.3%, izinga lokudumba ≤ 0.6%, kunye -40 ℃ ukumelana neqabaka. Emva kweminyaka elishumi yokuvavanywa, iglasi-yemagniziyam engangenisi umliloiphaneli ihlala ixesha elide, iyamelana nokuguga, kwaye inobomi obude.
Ukuxhathisa izinambuzane kunye nesihumba
Izinto ezingafunekiyo zezimbiwa zomgubo zenza umsebenzi wokulwa ukungunda, intsholongwane, intsholongwane kunye nokulwa iphaneli, ehlangabezana nemigangatho yokulwa nexoshomba yezixhobo zokwakha zaseYurophu naseMelika.
Egqithileyo Isitshisi sokucoca isibane-iTekMax
Okulandelayo: Iphaneli yegumbi elicocekileyo elenziwe ngezandla igumbi elicocekileyo
Iphaneli yesalathi somlilo
Iphaneli yeNkqubo yoMlilo
Iphaneli yamagumbi acocekileyo eyenziwe ngezandla
Isikhokelo sePaneli yeGumbi eliCocekileyo eliMacala amabini
Igumbi elicocekileyo lePhaneli
Iphaneli yegumbi elicocekileyo elenziwe ngomatshini
Umatshini wenza ipaneli yesilicate
Iphaneli yegumbi elicocekileyo ledwala
Iphaneli yegumbi elicocekileyo elenziwe ngezandla
Iphaneli yegumbi elicocekileyo elenziwe ngezandla lenziwe ngezandla
Iphaneli yegumbi elicocekileyo elenziwe ngezandla igumbi elicocekileyo
Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Igumbi lokucoca umoya ococekileyo, Inkqubo yaManzi aBandayo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Ifestile yegumbi elicocekileyo, Igumbi elicocekileyo,